Smartphone သုံးသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Xiaomi Gadget လေးတခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Xiaomi Tripod Selfie Stick ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ နာမည်အတိုင်းပဲ Tripod အဖြစ်သုံးမလား? Selfie Stick အဖြစ်ပဲသုံးမလား?​ ကြိုက်နှစ်သက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ Bluetooth Remote Control လည်းပါဝင်တာမို့ ပိုလို့တောင် Smart ဖြစ်လို့နေမှာပါ။ 360° လှည့်လို့ရတဲ့ Smartphone Holder လေးလည်းပါဝင်တယ်။ Body ကလည်း Aluminum Alloy နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ သပ်ရပ်ပြီး ကြာရှည်ခံ၊ အကြမ်းခံပြီး ပေါ့ပါးတယ်။ ခရီးထွက်ရင်း Selfie Sti...
စာရွက်ပေါ်ရေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို တိတ်နဲ့ကပ်ထားခဲ့တုန်းပဲလား?
Shopping Center တွေကို သွားတာဖြစ်စေ၊ လမ်းဘေးမှာ ကားရပ်ခဲ့တာဖြစ်စေ၊ သူများကားရှေ့ပိတ်ရပ်ခဲ့မိလို့/ ကားဖယ်ပေးဖို့အတွက် ဖုန်းခေါ်လို့ရအောင် မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အလွယ်တကူ စာရွက်နဲ့ရေးပြီး ကားမှန်မှာ တိတ်နဲ့ကပ်ထားတုန်းပဲဆိုရင်တော့ Xiaomi ရဲ့ MIJOY Car Temporary Parking Card Number Plate လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးမှာ0to9ဂဏန်းအပို (၆) တန်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂဏန်းတခုခုပျောက်သွားတာဖြစ်စေ၊ ဂဏန်းအသစ်လဲချင်တာမျိုးဖြစ်စေ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အချိန်ကြာကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြ...
နေ့စဥ်သွားတိုက်ခြင်းဟာ ခံတွင်းကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအတွက် အခြေခံအချက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဥ်ကတည်းက မိဘတွေဟာ သွားကိုစနစ်တကျတိုက်ဖို့ သင်ကြားပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အခု Xiaomi ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရေစိုခံ Electric Toothbrush လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် Electric Toothbrush လေးတွေကတော့ Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 နဲ့ T300 Model လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း Specs အနည်းငယ်ကွာခြားပြီးတော့ microUSB Charging နဲ့ USB Type-C Charging ဆိုပြီး အဓိကကွဲသွားပါမယ်။ ...
အနာခံပြီး ကတ်ကြေးတွေ၊ ဇာဂနာတွေ သုံးနေတုန်းပဲလား...?
ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေမှာ နှာခေါင်းမွှေးတွေရှည်လာပြီဆိုရင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ နှာခေါင်းမွှေးတွေကို သန့်ရှင်းဖို့အတွက် အလွယ်တကူ ကတ်ကြေးသေးလေးတွေ၊ ဇာဂနာတွေနဲ့ မှန်ကြည့်ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်လဲ? အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးက Xiaomi ကနေထုတ်ထားပြီးတော့ နှာခေါင်းမွှေးသန့်ရှင်းရေးအတွက် အင်မတန်မှကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ Electric Nose Hair Trimmer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက Battery သီးသန့်မပါပါဘူး။ AAA Battery တလုံးထည့်ပ...
မင်္ဂလာပါဗျ ..။ ဒီနေ့မနက်ကထွက်တဲ့ iOS 14 တင်ပြီးသွားကြပြီလားဗျ ..။ တင်ပြီးသွားပြီးရင် ဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတာတွေကို သတိထားမိရဲ့လား ?? " ဘာမှထူးထူးခြားခြား အသုံးဝင်တာတွေသိပ်မရှိဘူး .." " အသုံးဝင်တဲ့ Tips လေးတွေ ရှာမတွေ့ဘူး .." ဆိုရင်တော့ ဒီ Post လေးကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားလိုက်ပါ ..။ Use Widgets on Home Screen အရင် iOS Version တွေမှာတုန်းက Widgets တွေကို Home Screen First Page ရဲ့ရှေ့မှာပဲ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အခု iOS 14 မှာ အဲ့ဒီ Widgets တွေရဲ့ Design အနေအထားကို အပြေ...